dagaal oogayaasha: Kiristaalo of Power | Coinfalls Casino
dagaal oogayaasha: Kiristaalo of Power
The booska NetEnt dagaal oogayaasha: Kiristaalo of Power brags ganacsiga halis ah ka duwan inta badan boosaska cartoon Kaapelitalo ah. dagaal oogayaasha: Kiristaalo of Power isu keentaa 3 oogayaal dagaal ee iskhilaafay intay wax u ururiyo kiristaalo awoodda. Sidaas, ay baarto iyo macrifada awoodaha oo dhan inuu guulaysto maal aad iyo naftoodiiba. The 3 oogayaasha waa Barbari The, Priestess The, iyo Sumarai The. Waxay yihiin kuwa mas'uulka ka ah dalkaUganda soo baxay muuqaalada sida dhigeeysa xor ah oo dib-u-dhigeeysa, wilds Mire Waqaf oo iwm. si loo hubiyo in aad shaqaysato waa weyn oo ay leeyihiin waqti daahir xiiso leh.
Tan iyo markii ay 1996, NetEnt ayaa galay ganacsiga technology ciyaaraha ah. Shirkadda xafiisyada dalalka kala duwan ayaa ceshay sida Sweden, Malta, Ukraine, Gibraltar, USA, iyo Poland. Waxay yihiin balliga ka badan 700 shaqaalaha adeega ka badan 100 ee ka shaqeeya casino online dunida ee. Waxaa jira ku dhawaad 200 kulan xiiso ay credit ilaa taariikhda iyo liiska ayaa lagu abid ballaarinta.
dagaal oogayaasha: Kiristaalo of Power aad soo bandhigaysaa taariikh madow leh 5 duntu xidhhidha dhaqaaqin waxa ka badan. Afyare ayaa isla ups ruuxiinna dagaal la 30 paylines dhow dahay. kala duwan sharadka wuxuu ku bilaabmayaa ka ugu yaraan £ 0.15 ugu badnaan ee £ 150. gameplay wuxuu bixiyaa RTP ah 96.89% in ciyaartoyda. ciyaarta Afyare wuxuu abuuraa jawi dagaal qumman iyo abuurtaa jawi cajiib ah ciyaaryahanka. Astaanta duurjoogta ah waa card buunka oo u dhaqmo sida calaamad kasta oo kale si ay u sameeyaan guuleystay isku idiin. Waxaa jira 2 noocyada kala duwan ee wilds joogo in kulankaan, namely the standard wilds and the overlay wilds.
The 3 dagaal oogayaal kale oo jira calaamado firdhin ah. Markaasaa waxaa taas waxaa weeyaan ah ayaa Barbari deeqsi, The Priestess iyo dhigeeysa free Sumarai bixiyeen in Afyare.
dagaalka ayaa go'aansada muuqaalada dhan aad la caadaysteen doonaa in inta lagu guda jiro gameplay. Markaasuu, waxaa jira qaar ka mid ah qaababka kale random ee ciyaarta oo aad loo xidho inay ku raaxaystaan. Kuwanu waa feature Final Fursada, Battle feature, iyo calaamadaha Mire Waqaf, oo dhan keeno abaalmarino badan oo xiiso leh si aad u.
Tirada muuqaalada dheeraad ah ee ciyaarta hubaal dhigaysa booska this istaagaan oo ka mid ah ciidanka boosaska la heli karo ee suuqa. Haddii aad ku raaxaysato gameplay a xiiso at xawaaraha breakneck ah maydhashada kaydsada ah muuqaalada sida, ka dibna dagaal oogayaasha: Kiristaalo of Power waa Afyare kugu habboon.